LINUX ကိုတခုတခုအပေါ်မှာ FTP ကို-SERVER ကိုဖန်တီးရန်ကဘယ်လို - LINUX ကို - 2019
Linux ကိုအပေါ် FTP ကို-server ကိုဖန်တီးပါ
ကွန်ယက်ကျော်ဖိုင်များကိုလွှဲပြောင်းတစ်ဦးစနစ်တကျ configure လုပ် FTP ကို-server ကိုမှတဆင့်ထုတ်ယူသွားတတ်၏။ ဤသည် protocol ကိုတစ်ဦးကို client-server ကိုဗိသုကာပေါ်သည် TCP လျှောက်လွှာနှင့်အတူအလုပ်ဖြစ်တယ်နှင့်ချိတ်ဆက် node များအကြားပညတ်တော်တို့ကို၏ဂီယာများအတွက်အမျိုးမျိုးသောကွန်ယက်ကိုဆက်သွယ်မှုများကိုအသုံးပြုသည်။ လိုအပ်ချက်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်တိကျတဲ့ hosting အတွက် ချိတ်ဆက်. သူကိုအသုံးပြုသူများသည်ဆိုက်၏စစ်ဆင်ရေး, ဒါမှမဟုတ်တခြားဆော့ဗ်ဝဲကိုသေချာစေရန်န်ဆောင်မှုများကိုကုမ္ပဏီရဲ့လိုအပ်ချက်အပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး FTP ကို-server ကို configure ။ Next ကိုကျနော်တို့ utilities တစျဦး၏ဥပမာထဲမှာတစ်ဦးဟာ Linux server ကိုဖန်တီးရန်ပုံကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်။
ယနေ့ကြှနျုပျတို့ VSftpd ဟုခေါ်သော tool ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်များစွာလည်ပတ်မှုစနစ်များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သောဤကဲ့သို့သော FTP ကို-ဆာဗာ၏အားသာချက်များ, တရားဝင်အမျိုးမျိုးသော Linux ကိုဖြန့်ဝေ၏ repository ကိုနှင့်မှန်ကန်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက် configure လုပ်ဖို့အတော်လေးလွယ်ကူထိန်းသိမ်းထားသည်။ စကားမစပ်, linux kernel ကိုတရားဝင်ဒီအထူးသဖြင့် FTP ကိုအသုံးပြုကြသည်နှင့်များစွာသော hosting အတွက် VSftpd ထားရန်အကြံပြုသည်။ ဒီတော့လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းများကို install နှင့် configuring ၏ခြေလှမ်းဖြစ်စဉ်ကိုကခြေလှမ်းကြှနျတျောတို့၏အာရုံကိုလှည့်ကြကုန်အံ့။
အဆင့် 1: VSftpd Install
ပုံမှန်အားဖြင့်, VSftpd ဖြန့်ဝေအားလုံးကိုလိုအပ်သောစာကြည့်တိုက်များရရှိနိုင်မဟုတျပါ, ဒါကြောင့်သူတို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့ console ကနေ download လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဤအမှုကိုပြုသောသည်:
အဆိုပါဖွင့်ပါ "Terminal နှင့်" မီနူးကနေတဆင့်ဥပမာဆိုအဆင်ပြေနည်းလမ်း, ။
Debian သို့မဟုတ် Ubuntu ကိုအသင်း၏ဗားရှင်း၏ပိုင်ရှင်များမှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါသည်sudo vsftpd install apt-get။ CentOS, Fedora -yum vsftpd installထိုအ Gentoo အဘို့ -vsftpd ပေါ်ထွက်လာ။ နိဒါန်းပြီးနောက်, အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ဝင်ရောက်installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ပါရန်။
မှန်ကန်သော password ကိုရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်သင့်အကောင့်အတွက်ပိုင်ဆိုင်မှု Verify ။
မည်သည့်အိမ်ရှင်ထံမှတစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံကို virtual server ကိုပါဝင်ပတ်သက်နေတံ့သောကိုင်ဆောင်သူ CentOS, ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ။ သင်တစ်ဦးဝေဖန်အမှားတပ်ဆင်ခစဉ်အတွင်းဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမရှိဘဲဖော်ပြပါတယ်အဖြစ် module တစ်ခု kernel ကို update လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ တသမတ်တည်းသောဤပညတ်တို့ကိုရိုက်ထည့်ပါ:
rpm ပါ -Uvh //www.elrepo.org/elrepo-release-7.0-2.el7.elrepo.noarch.rpm
yum yum-plugin ကို-fastestmirror install
wget သည် //mirrors.neterra.net/elrepo/kernel/el7/x86_64/RPMS/kernel-ml-3.15.6-1.el7.elrepo.x86_64.rpm
yum kernel ကို-ml-3.15.6-1.el7.elrepo.x86_64.rpm install
wget သည် //mirrors.neterra.net/elrepo/kernel/el7/x86_64/RPMS/kernel-ml-devel-3.15.6-1.el7.elrepo.x86_64.rpm
yum kernel ကို-ml-devel တွင်-3.15.6-1.el7.elrepo.x86_64.rpm install
wget သည် //mirrors.neterra.net/elrepo/kernel/el7/x86_64/RPMS/kernel-ml-doc-3.15.6-1.el7.elrepo.noarch.rpm
yum kernel ကို-ml-doc-3.15.6-1.el7.elrepo.noarch.rpm install
wget သည် //mirrors.neterra.net/elrepo/kernel/el7/x86_64/RPMS/kernel-ml-headers-3.15.6-1.el7.elrepo.x86_64.rpm
yum kernel ကို-ml-ခေါင်းစီး-3.15.6-1.el7.elrepo.x86_64.rpm install
wget သည် //mirrors.neterra.net/elrepo/kernel/el7/x86_64/RPMS/kernel-ml-tools-3.15.6-1.el7.elrepo.x86_64.rpm
wget သည် //mirrors.neterra.net/elrepo/kernel/el7/x86_64/RPMS/kernel-ml-tools-libs-3.15.6-1.el7.elrepo.x86_64.rpm
yum kernel ကို-ml-tools တွေကို-libs-3.15.6-1.el7.elrepo.x86_64.rpm install
yum kernel ကို-ml-tools တွေကို-3.15.6-1.el7.elrepo.x86_64.rpm install
wget သည် //mirrors.neterra.net/elrepo/kernel/el7/x86_64/RPMS/kernel-ml-tools-libs-devel-3.15.6-1.el7.elrepo.x86_64.rpm
yum kernel ကို-ml-tools တွေကို-libs-devel တွင်-3.15.6-1.el7.elrepo.x86_64.rpm install
wget သည် //mirrors.neterra.net/elrepo/kernel/el7/x86_64/RPMS/perf-3.15.6-1.el7.elrepo.x86_64.rpm
yum စွမ်းဆောင်ရည်-3.15.6-1.el7.elrepo.x86_64.rpm install
wget သည် //mirrors.neterra.net/elrepo/kernel/el7/x86_64/RPMS/python-perf-3.15.6-1.el7.elrepo.x86_64.rpm
yum Python နှင့်-စွမ်းဆောင်ရည်-3.15.6-1.el7.elrepo.x86_64.rpm install
yum --enablerepo = elrepo-kernel ကို kernel ကို-ml ကို install
မဆိုအဆင်ပြေလမ်း configuration file ကိုဖွင့်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး၏အဆုံးပြီးနောက်/boot/grub/grub.conf။ ရလဒ်အဖြစ်အောက်ပါ parameters တွေကိုသက်ဆိုင်ရာအဓိပ္ပါယ်များရှိသည်ကိုဒါ contents တွေကို Edit:
က default = 0
အချိန်ကုန် = 5
kernel ကို /boot/vmlinuz-4.0.4-1.el7.elrepo.x86_64 console ကို = hvc0 xencons = tty0 အမြစ် = / dev / xvda1 ro
ထို့နောက်သငျသညျကိုသာဆက်ကပ်အပ်နှံ server ကိုပြန်လည်စတင်ရန်နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာရန် FTP ကို-ဆာဗာ၏ချက်ချင်းတပ်ဆင်ရန်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။
အဆင့် 2: ပထမဦးဆုံးအချိန် setup ကို FTP ကို-server ကို
အတူတူက၎င်း၏ configuration ဖိုင်အားဖြင့်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိ program ကို, ထိုအရပ်မှစတင်နှင့် FTP-server ကို functioning အတူ။ အားလုံး settings ကိုသက်သက်သာတစ်ဦးချင်းစီ hosting အတွက်သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဦးစားပေး၏အကြံပြုချက်များအပေါ်လုပ်နေကြသည်။ ကျနော်တို့သာဒီဖိုင်ကိုဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုဖျောပွနိုငျ, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင် parameters တွေကိုအာရုံစိုက်ဖို့သေချာပါဖြစ်သင့်သည်။
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း Debian သို့မဟုတ် Ubuntu ကိုလည်ပတ်မှုစနစ်များအတွက် config ကိုဖိုင်ကိုပြေး:sudo nano /etc/vsftpd.conf။ ကလမ်းပေါ်သည် CentOS နဲ့ Fedora/etc/vsftpd/vsftpd.confထိုအ Gentoo အတွက် -/etc/vsftpd/vsftpd.conf.example.
console ကို, သို့မဟုတ်ကာ text editor မှာတော့ဖိုင်ကိုကိုယ်နှိုက်ကပြပေးလိမ့်မယ်။ ဤတွင်အောက်ပါသတ်မှတ်ထားသောပစ္စည်းများအာရုံစိုက်။ သင့်ရဲ့ configuration ဖိုင်ထဲမှာသူတို့အတူတူပင်တန်ဖိုးကိုရှိသင့်ပါတယ်။
ဟုတ်သည် = local_enable
ဟုတ်သည် = write_enable
အဆင့် 3: မြင့်မားသောအခွင့်ထူးနှင့်အတူအသုံးပြုသူတစ်ဦးထည့်သွင်းခြင်း
သငျသညျ FTP ကို-Server နဲ့မဟုတ်ဘဲယင်း၏အဓိကအကောင့်မှတဆင့်အလုပ်လုပ်ချင်ဒါမှမဟုတ်ပရိုဖိုင်းအသုံးပြုပုံအခြားအသုံးပြုသူများနှင့်အတူမျှဝေချင်လျှင် utility ကိုရယူသုံးတဲ့အခါမှာရန် SuperUser ဖြစ်ရမည်လက်လှမ်း၏ငြင်းပယ်မအမှားအယွင်းများရှိပါတယ် VSftpd ။
စတင် "Terminal နှင့်" နှင့် command ကိုရိုက်ထည့်sudo adduser user1ဘယ်မှာ user1 - သစ်ကိုအကောင့်၏အမည်။
ထိုသို့စကားဝှက် Set, ပြီးတော့သူကအတည်ပြုပါ။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အနာဂတျမှာအကောင့်၏အိမျ directory ကိုမှတ်မိဖို့အကြံပြု console ကိုတဆင့်အဲဒါကိုအယူခံဖို့လိုအပ်လိမ့်မည်။
လိုအပ်ပါကအပြည့်အဝအမည်, အခန်းတစ်ခန်းနံပါတ်, ဖုန်းနံပါတ်များ, နှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များ - အခြေခံသတင်းအချက်အလက်ဖြည့်စွက်။
ထို့နောက်ရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်အသုံးပြုသူတိုးချဲ့အခွင့်အရေးများ assignsudo adduser user1 sudo.
ယင်း၏ဖိုင်တွေမှတဆင့်၏သိုလှောင်မှုအတွက်အသုံးပြုသူများအတွက်သီးခြား directory ကိုဖန်တီးပါsudo mkdir / home / user1 / files တွေကို.
ထို့နောက်သင့်အိမ်ဖိုင်တွဲကနေတဆင့်မှ navigatecd / homeအဲဒီမှာစာရိုက်ကအသုံးပြုသူအသစ်က၎င်း၏ directory ၏ပိုင်ရှင်စေရန်chown အမြစ်: အမြစ် / home / user1.
မည်သည့်အပြောင်းအလဲများကိုလုပ်ပြီးနောက်ဆာဗာ restart လုပ်ပါsudo ဝန်ဆောင်မှု vsftpd ပြန်ဖွင့်။ သာ Gentoo ဖြန့်ဖြူးအတွက် utility ကိုမှတဆင့် reboots လုပ်သွား/etc/init.d/vsftpd ပြန်ဖွင့်.
ယခုတွင်သင်သည်လက်လှမ်းအခွင့်အရေးများတိုးချဲ့ခဲ့သူတစ်ဦးအသုံးပြုသူအသစ်၏ကိုယ်စားအပေါ် FTP ကို-server ပေါ်မှာအားလုံးလိုအပ်သောလုပ်ဆောင်ချက်များနိုင်ပါတယ်။
အဆင့် 4: (သာ Ubuntu ကိုများအတွက်) Configure Firewall ကို
ဆိပ်ကမ်း setting ကိုဘယ်နေရာမှာမဆိုအခြားမလိုအပ်ကတည်းကသည်အခြားဖြန့်ဝေ၏အသုံးပြုသူများလုံခြုံစိတ်ချစွာသာ Ubuntu မှာ, ဒီအဆင့်ကိုကျော်သွားနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် Firewall ကိုကျွန်တော်လိုအပ်လိပ်စာများကနေဝင်လာသောအသွားအလာလက်လွတ်, ဒါကြောင့်သင်၌မိမိလက်၏ကျမ်းပိုဒ်ကိုခွင့်ပြုရန်မလိုအပ်လိမ့်မည်ဟုထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။
console ကိုခုနှစ်တွင်အလှည့်အတွက် command ကိုသက်ဝင်စေsudo ufw ကို disableနှင့်sudo ufw enableကို Firewall ကို restart လုပ်ပါရန်။
သုံးပြီးဝင်လာသောဆက်သွယ်မှုများအတွက်စည်းကမ်း Addsudo ufw 20 / TCP ခွင့်ပြုနှင့်sudo ufw 21 / TCP ခွင့်ပြု.
အဆိုပါလျှောက်ထားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို Firewall ကို၏ status ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်ချမှတ်ထားခြင်းရှိမရှိ Checksudo ufw status ကို.
/etc/init.d/vsftpd စတင်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှု vsftpd စတင်- အတွက် configuration ဖိုင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ;
Netstat -tanp | grep နားထောင်ရန်- installation ကို FTP ကို-server ကို Check;
လူကို vsftpd- သင် utility ကိုပတ်သတ်ပြီးနှင့်အတူလိုအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုရှာတရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများ VSftpd စိန်ခေါ်;
ဝန်ဆောင်မှု vsftpd ပြန်ဖွင့်သို့မဟုတ်/etc/init.d/vsftpd ပြန်ဖွင့်- ဆာဗာ restart လုပ်ပါရန်။
ယင်း၏အိမ်ရှင်များ၏ကိုယ်စားလှယ်များကဤဒေတာအတွက်လျှောက်ထားရန်, သူနှင့်အတူဦးတယောက်က FTP-server ကိုနောက်ထပ်အလုပ်ဝင်ရောက်ဖို့ကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ. အတူ။ သူတို့ကသင် settings ကို၏ရှုပ်ထွေးပွေလီလှနှင့်အမှားများကိုအမျိုးမျိုးပေါ်ပေါက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
ဤဆောင်းပါး၌အဆုံးသတ်ထံသို့မရောက်ရ။ ဒီနေ့ဆို hosting အတွက်ရည်ညွှန်းခြင်းမရှိဘဲ VSftpd server ကို installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်တင်ဆောင်လာသောအတွက်အကောင့်သို့ဤယူနှင့်သင့်ကို virtual server ကိုင်ကုမ္ပဏီများကထောက်ပံ့ပေးသူတို့နှင့်အတူသူတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ဆောင်ပုဒ် setup ကို LAMP အစိတ်အပိုင်းများ disassembled ရသောကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြားရုပ်ပုံများနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းရအကြံပြုသည်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Ubuntu မှာသတ်မှတ်ထား LAMP program ကို install လုပ်ခြင်း